Yuhuudda oo Wali Duqeymo ku Garaacaysa Qazza Iyo Kooxaha Muqaawamada oo Jawaab Adag Bixinaya – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Yuhuudda oo Wali Duqeymo ku Garaacaysa Qazza Iyo Kooxaha Muqaawamada oo Jawaab Adag Bixinaya
Last updated May 15, 2021 212 0
Weli waxaa halkeeda kasii soconaya duqeymaha xoogan ee ay Yahuudu ku garaacayaan deegaannada Jiidda Qazza ee dhulka Filastiin, iyadoona dhinac kale muslimiinta iyo kooxaha muqawaamada ay dhigayaan wacdaro adag oo ku aadan adkeysiga.
Saacadihii lasoo dhaafay, diyaaradaha maamulka Yahuudda waxay duqeymo xoogan ku garaaceen deegaanno kala duwan oo katirsan Qazza, halkaas oo ay waxyeello kala duwan kasoo gaartay dadka shacabka ah ee muslimiinta ah.
Mimd kamid ah duqeymaha wuxuushnimada ah waxay ciidamada Yahuuddu ku garaaceen kaamka Ash-Shaadhi’i ee ku yaala Qazza, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaran 10 ruux.
Guri ku yaalay kaamka ayay diyaaraduhu ku dhufteen gantaalka, halkaasna waxaa ku shahiiday ugu yaraan 10 ruux, kuwaas oo 8 kamid ah ay caruur ahaayeen, halka labada kale ay haween yihiin, waxaana duqeynta gurigaas lagu dhuftay ka badbaaday oo keliya canug dhallaan ah oo dhalan 2 bilood.
Ehellada dadka halkaas ku shahiiday oo warbaahinta la hadlay waxay tilmaameen in waxa ka dhacay kaamka Ash-Shaadhi’i aan la cabiri karin, islamarkaana gumaad wuxuushnimo ah loo geystay dadka muslimiinta ah.
Diyaaradaha Yahuudda waxay sidoo kale duqeeyeen dhismo ballaaran oo lagu magacaabo Al-Jalaa, kaas oo ku yaala magaalada Qazza, waxaana dhismahaas deganaa warbaahin, shirkado iyo dhakhaatiir, warbaahinta deganaana waxaa kamid ah telefeshinka Al-Jazeera.
Muuqaallo la baahiyay waxaa lagu arkayaa dhismaha oo sii hoobanaya, kadib markii gantaallo dhowr ah ay ku dhufatay diyaaradda maamulka Yahuudda.
Saraakiil u hadlay ciidamada Yahuudda waxay ku doodeen in dhismaha ay ku dhuumanayeen xubno katirsan garabka milliteri ee Cizzudiin Al-Qassaam.
Dhinac kale, kooxaha muqaawamada waxay aad u garaacayaan deegaannada ay Yahuudu xooga ku heystaan, waxaana kamid ah meelaha ay sida ba’an u duqeeyeen magaalada Talla’biib ee caasimadda maamulka Yahuudda.
Gantaallada ay rideen muqaawamada waxay qaarkood ku dheceen garoonka diyaaradaha ee Bin Goriyon, kaasoo wei xirin, islamarkaana aaney ka socon wax howl ah.
Casqlaan, Bi’ri Sabac iyo magaalooyin kale oo kamid ah dhulka Filastiin, balse ay xoog ku heystaan Yahuudda ayaa kamid ah goobaha ay gantaallada muqaawamadu gaareen, waxaana dadka muslimiinta ah ee halkaas ku sugan, dhulkoodana xooga lagu heysto ay dhigayeen dabaaldegyo farxadeed oo ay ku muujinayaan sida ay ugu faraxsanyihiin in gantaallada muqaawamada ay soo gaaraan magaalooyinkooda.
Afhayeen u hadlay garabka milliteri ee Cizzu-diin Al-Qassaam wuxuu shaaca ka qaaday iney isku diyaariyeen in 6 bilood oo xiriir ah ay duqeeyaan magaalada Talla’biib ee caasimadda Yahuudda, diyaarna ay u yihiin ixtimaal weliba.